साथीको कुरा मान्दा: साथीको मृ’त्यु, पूजलको भयो यस्तो हालत (भिडियोसहित)
July 12, 2020 1048
आज भन्दा ६ महिना पहिला पुजल ठकुरीको जि’वन अर्कै थियो । उनी काठमाडौंको कमल पोखरी स्थित ट्रडिस्नल कन्फर्ट’मा काम गर्थे ।
उमेरले १७ वर्षका पुजल १२ वर्षमा पढ्दै थिए । जिवनमा राम्रो काम गर्ने, पैसा कमाउने योजना थियो । १२ कक्षामा पढ्दै गर्दा पनि उनले काम गर्न था’लेका थिए ।
सबैसंग मिल्ने, हाँसेर बोल्ने उनी सबैको प्यारा थिए । साथीभाईले पनि निकै माया गर्थे । तर ६ महिना अघि साथीको जन्म’दिन मनाउन भन्दै साथीको घर गएका पुजलको जिवनमा नसोचेको घ’टना भयो । उनी साथीको घरमा जन्मदि’न मनाए ।
साथीभाईसंग’को जमघट निकै रमाइ’लो भयो । जन्मदिनको पार्टी मनाएर उनी घर फर्कन थाले । जसको जन्मदिन थियो उनै साथीले यो रातिको समयमा एक्लै नजानु म मोटरसा’इकलमा लैजान्छु भने ।
साथीको आग्रह मानेर उनी पनि मोटरसाइक’लमा संगै घर फर्कन्छन् । तर विच बाटोमा आइपुग्दा साथीले चलाएको मोटरसाइकल दुर्घ टना हुन्छ । जसको जन्मदिन थियो ति साथीको घट ना स्थलमै नि धन हुन्छ ।
जन्मदिन नै साथीको लागि मर ण दिन बन्यो । तर सुजल भने जिवनभरका लागि यस्तो पी डा लिएर बाँचे । साथीको निध न भयो भने पुजल वे होस अवस्थामा हुन्छन् ।
कसैले पुजललाई अस्पताल लैजान्छन्, अनि मिना चन्द ठकुरी(आमा) लाई अस्पताल वाट फोन आउँछ । उनलाई छोराको दुर्घट ना भएको खबर आएपछि मिनालाई ठूलो चो ट पर्छ ।
पुजलको टाउको मा गम्भि र चो ट लागेको थियो, खुट्टा भाँचि एको थियो । पुजल अस्पतालवाट डिस्चार्ज त भए तर अहिले उन को जिवन फेरीएको छ । उनी अरुको सहारा मा खानुपर्छ । ब्यक्ति गत कामका लागि अरुकै सहारा चाहिन्छ ।
मिना चन्द ठकुरी उनै हुन् जसवले अप्ठेरोमा परेका सयौं महिला को सहारा बनेकी छन् । निशुल्क ड्रा इभिगं सिकाएर दुख पाएका महि लालाई आत्मनिर्भर बनाउँछिन् ।
धेरै महिलाको सहारा बनेकी मि’ना अहिले आफै निकै ठूलो अप्ठेरोमा परेकी छन् । छोराको यस्तो अवस्था भयो, त्यही अवस्थामा सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण अन्य काम पनि गर्न पाएकी छैनन् । यति धेरै वर्ष अरुको सहारा बनेकी मिना’लाई अहिले अरुको सहयोगको खाँचो छ ।
छोराको यस्तो अवस्था भए’पछि अब मिना’लाई अर्को समस्या छ । कान्छो छोरा र आफ्नो पेट पाल्ने जेठो छोरा पुजलको उपचार गर्ने, काठमाडौंको कोठा भाडा तिर्ने यस्ता सम’स्या अब कसरी टार्ने भन्ने उनको समस्या छ । दर्द’नाक भिडियो…..
Prevआज कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? हेर्नुहोस्…
Nextझनै ठूलो झुण्ड बनाएर सलह नेपाल पस्यो…(भिडियो सहित)
दुःख’द खबर- मोटरसाइकललाई बचाउन खोज्दा बस दुर्घ’टना
विष्णु माझी आजसम्म पनि किन बाहिर सार्वजनिक हुँदिनन् ? खुल्यो यस्तो रहस्य (भिडियो सहित)
रमाइलो कमेडीले भरिएको ‘खस खस’ को नयाँ एपिसोड हेर्नुहोस्… (भिडियो सहित)
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (105759)
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (104159)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (83737)
बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ( हृदयस्पर्शी कहानी) (80681)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (72185)
स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (69060)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (68367)
हेर्नु’होस् नेपाली सेनाको यस्तो क’ठोर …. जुन भिडियो संसारभरी भाइरल (भिडियो हेर्नु’होस्) (67456)
सुन्दर युवती र नेपाल आर्मीका सिपाहीको यो भाईरल भिडियो लाखौंले हेरे (भिडियो सहित) (67380)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (64893)
टिकटक बनाउने क्रममा नदीमा खसेकी युवतीको शव ८ दिनपछि भेटियो
भारतमणिले जिते ‘कमेडी च्याम्पियन २’ को उपाधि ! यस्तो देखियो माहोल (भिडियो सहित)